Ithegi: Ingxabano | Martech Zone
Ngaba iDroplr sesona sixhobo sokwabelana ngeFayile siFanelekileyo?
NgoLwesihlanu, ngoJuni 8, 2018 NgoMgqibelo, ngoJuni 9, 2018 Douglas Karr
Ibhokisi, iDropbox, iDrayivu kaGoogle… nabathengi abaninzi basebenzisa amaqonga ahlukeneyo, iifolda zam zabaxhasi ziyintlekele. Kanye ngeveki okanye njalo, ndihambisa yonke idatha yam yabathengi kwisabelo esicocekileyo nesilungelelanisiweyo esixhaswayo. Usuku nosuku, nangona kunjalo, ibiyintlekele ukuzama ukufumana nokuthumela iifayile… kude kube ngoku. Iarhente yethu yamaqabane isebenzisa iDroplr. Ukuthandabuza ukufumana esinye isixhobo sokwabelana ngefayile, andizange ndithengiswe ekuqaleni. Nangona kunjalo, ngokuhamba kwexesha